Ngaba iinzame zeNkampani yakho yeNtengiso yezeNtlalontle ziya kuhlawula?
Kule veki, umthengi esidibana naye ebebuza ukuba kutheni umxholo abasebenza nzima kuwo ungabonakali wenza umohluko. Lo mthengi akakhange asebenze ukuphuhlisa oku kulandelayo kwimidiya yoluntu, endaweni yokusebenzisa uninzi lweenzame zabo kwintengiso ephumayo.
Sibanike umfanekiso wobungakanani babaphulaphuli babo kwimidiya yoluntu ngokuthelekiswa nabo bakhuphisana nabo- kwaye ke sibonelela ngefuthe ebenalo kwindlela ekwabelwana ngayo ngomxholo womntu okhuphisana naye. Amanani makhulu… ukonyusa abaphulaphuli abaninzi kwimidiya yoluntu kugxotha phantse wonke umntu kwisithuba. Ukuze ukhuphisane nomxholo, umxhasi wethu kufuneka akhuphisane kwimidiya yoluntu, naye!
Ukuze uphumelele ekuthengiseni ishishini lakho kwimidiya yoluntu, kufuneka utyale ixesha kunye nezixhobo. Lo mthi wesigqibo uyakunceda ubone ukuba ukulungele ukumilisela iinzame ezimalunga neendaba ezentlalo eziya kuthi zikhokelele kunqwalaselo ngakumbi kunye nezikhokelo zeshishini.
Kule mihla, ndingongeza umbuzo ongezelelweyo kwaye nokuba unganakho na ukukhuthaza umxholo wakho kwimidiya yoluntu ngokusebenzisa iiprofayili kunye nomxholo ophakanyisiweyo. Ukuba uyinkampani ephehlelela iinzame zakho zemidiya yoluntu, unokufumana ukulandelwa ngokukhawuleza ngotyalo-mali ekwakheni abaphulaphuli bakho ngokukhawuleza.
Ngethamsanqa kuwe, amaqonga eendaba ezentlalo unezixhobo ezintle kunye namathuba okujolisa ekwenzeni kanye loo nto. Kwiqonga elinje ngeFacebook, usenokufumana ukubambeka okungcono ngomxholo ophakanyisiweyo kunokuba nje kwiphepha lenkampani yakho.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyethu Qhubeka ikhonkco lokudibana.
tags: umthi wesigqiboishishiniukubuya kutyalo maliROIImidiya yokuncokolaUmxholo wemidiya yoluntuukuguqulwa kweendaba ezentlaloukugxekwa kwimidiya yoluntuukhuseleko kwimidiya yoluntuIsigqibo somthi kwimidiya yoluntunxaxheba kwezentlaloimithombo yeendaba ezentlaloimbuyekezo yemidiya yoluntu kutyalo-maliimidiya yokuncokola roiUkwabelana ngemidiya yoluntuamaqhinga eendaba ezentlalointlalo yoluntu